ဒေါင်းတမာန်: 08/02/2009 - 08/09/2009
၈၈ ပုံရိပ်များက ပြောသော စစ်အုပ်စုသမိုင်း
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Saturday, August 08, 20090comments
ဆိုရှယ်လစ် စနစ်တခုကို အသက်သွေးများနဲ့ လဲယူခဲ့ကြရတဲ့၈-၈-၈-၈ လုံးကျောင်းသားတော်လှန်ရေးကို မမေ့ ကြနဲ့ 
ကိုမျိုး ဒီဇိုင်းနာမှ သရုပ်ဖေါ်လိုက်တဲ့၈၈၈၈ နေ့ အမှတ်တရပုံပါ။ ၈-လေးလုံးနေ့ မတိုင်မှီ ဒီထက်ပို ထူးခြားမယ့် ဒီဇိုင်ပုံ ကို ကိုမျိုးထံမှ တွေ့ မြင်ရဦးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ထို့ အတူဘဲ ၈၈၈၈ လုံးကြောင့်တိုက်ပွဲ ၀င်ရင်း အသက်ပေါင်းများစွာ ဗမာ့မြေပြင်ပေါ်မှာစီးခဲ့ ရတာ ရှိသလို အသက်ရှင်ကျန်ပြီး ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ တဲ့၈၈မျိုးဆက် အများအပြားရှိခဲ့ ပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြည်ပနိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာနေထိုင်ခဲ့ ကြပေမယ့်လည်း ၈၈ ကို မမေ့ ကြစေဖို့ နဲ့တတ်အားသ၍ အဖက်ဖက်မှ ဒီမိုကရေစီအမှန်တကယ်ဖေါ်ဆောင်နေသူများကို ထောက်ခံအားပေးပံ့ပိုးစေလိုပါတယ်။ ယ္ခုလောလောဆယ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အရာရာစွန့် လွှတ်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်နေတာ မမေ့ ဖို့လစ်လျူမရှုထားဖို့သတိမမေ့ ကြပါနဲ့ ။ စစ်အာဏာရှင်တည်နေသ၍ တော်လှန်နေမည်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ် အမြဲမွေးမြူကြပါ။ ၈၈၈၈ စိတ်ဓါတ် အဓွန့် ရှည်ရမည်။
ကျေးလက်တောရွာမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးနောက် စစ်အစိုးရတပ် မုဒိမ်းကျင့်မှု ထပ်မံကျူးလွန် သောကြာနေ့၊ 07 သြဂုတ်လ 2009 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
စစ်အစိုးရတပ်များ သျှမ်းပြည်အလယ်ပိုင်းကျေးရွာ ၁၀ ရွာကျော် (အိမ်ခြေ ၃၀၀ ကျော်) မီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးနောက်ပိုင်း ဒေသခံ တောင်သူအမျိုးသမီးတဦးအား အုပ်စုလိုက် မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ကြောင်း သျှမ်းပြည်အလယ်ပိုင်း သတင်းရပ်ကွက်ကဆိုသည်။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Friday, August 07, 20090comments
Human Right-လူ့ အခွင့်အရေး ဆိုတာ
မြေပွေးက..ရေမြွေလို ဟန်ဆောင်ပါလှဲ့ 
ဒါက..ရိုးစင်းတဲ့ တိုက်ပွဲ ဗျူဟာ..
မသိသူသာ ခံပေဦးတော့ ဒီတပွဲ..
ဒို့ လူတွေဘဲ အလဲလဲအကွဲကွဲအပြဲ..
ထပ်ထပ်ခါမှား သူတို့ တော်တယ်မမှတ်နဲ့ 
အဝေးဆီ ပစ်လိုက်တဲ့ ဒုတ်တစ်ဒုတ်.
အိမ်ထဲကို သူခိုးဝင်နိုင်မည် သတိပြု..
နန္ဒာလှိုင် တို့အတင်းပြော အသံဖိုင်..
မော်စကို က စစ်ဗိုလ်လေးနဲ့ ကောင်မလေးအပုပ်..
မေးငေ့ါ ချင်စရာလုပ်တာ ဘာကြောင့်လည်း။
ခေါင်း မှာ ဒဏ်ရာပလပွ..ဓါးပြလက်ချက်နဲ့ 
နာဂစ် အရှိန်ကောင်းစဉ်..ဆူနာမိက လူသေဓါတ်ပုံပြ..
အဟုတ်ထင် သတင်းတင်ကြတဲ့ သူတွေကို လက်ညှိုးထိုး..
မင်းတို့ ရေးတဲ့ သတင်းမှား..မိုးလုံးပြည့် မုသားဝါဒ
ဘိန်းပစ် စွပ်စွဲချင်သူ နအဖများ။
ကျွန်ထပ်ခံတော့ နောက်ထပ် အနှစ် (၂၀)။
ဒေါ်စုသတင်း က Hot နေခိုက်.
ဆူပူမှုတွေ လာမှာ ကြောက်တာကြောင့်..
မက္ကဆီကို လူဆိုးရဲ့ ငွေပုံကိုပြ..
ဒါ တေဇ ငွေတဲ့.။ .ဒို့ တတွေ ကို တက်ခွေတယ်။
အမှန်က မင်းမော်ကွန်း ဆိုတာ..
ဘာမှ အရေး ပါသည်မဟုတ်
သူတို့အချိုးမပြေ..သူ မိုက်ရိုင်းနေ
လွယ်ပါတယ် မကြည့်နဲ့ ပေါ့။
သူ့ သဘောသူဆောင် မြောင်းထဲ ဂျောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
ကျော်ဆန်း စိတ်ချမ်းသာအောင် ညင်းမနေကြပါနဲ့ ။
ဘော်လုံးကလေးတလိမ့်လိမ့်သူငါလု..
တင်စရာအပြစ်တွေ လည်စုမနေပါနဲ့ 
မြောက်ကိုရီးယားနဲ့နျူကလီယားလှို့ဝှက်ချက်အတွက်..
ရေခဲရေ နဲ့ပက်အေး.လိုက်တာ..
ဒို့ တွေ ဘယ်ဝိုက် တစ်ချက်ခံလိုက်ရပြန်တယ်။
ချကြွေးမဲ့ လူတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်။
မဟုတ်က ဟုတ်ကတွေ ဆက်ထွင်ဦးမယ်။
အကြင် သတိပြုပါ ဘုန်းဘုန်း။
low profile နေ..
အရင်မလိုနဲ့ ..သ၀န်မတိုနဲ့ 
စိတ်မတိုနဲ့ ..သဘောမချိုနဲ့ ..
အသက်ပေးရှေ့ ကျုံးတက်ဖို့ က အရေးမကြီးဘူး။
ရန်သူ တစ်ထောင် ရန်မြှောင် တစ်သိန်း..
သင့် ဦးဏှောက်ကို မယိမ်းပါးစေနဲ့ 
ရေရှည် တိုက်မဲ့ မီဒီယာပွဲ..
ကျော်ဆန်းရှေ့ဒူးမထောက်ချင်ရင်.။
မသဒ္ဓါ ( ၈။၄။၂၀၀၉)
စေတနာဖြင့် ရေးပါသည်။ ပေါက်ဆိန် ဒါးနဲ့မထွင်းလိုလျှင်..အပ်နဲ့ ထွင်းသင့်၍ ထွင်းရမည်။ သွေးထွက်သင့်သလောက် ထွက်ရသည်..နာသည် မနာသည်။ ခါးသည် မခါးသည် ထက် အမှန်ဆိုတာ အသိရဖို့ တချက်ဘဲ လိုလားသည်။ မှန်တာဆိုက ..ချို ရိုးထုံးစံမရှိ။
ကောင်မ ဘယ်လောက်တတ်သလည်း..ဘာညာ လာဆဲချင် လာဆဲပေါ့။ မဆဲခင် ရှက်တတ်ရင်တော့ အရင် စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ ကျမပြောသောအရာများ မှန်သည် မှားသည်။ သူများဆင်ကွက် အားလျှားမှောက်တာ..မရှက်တတ်ရင်...ထပ်ပြောဖွယ်ရာမရှိပါဖူး။ ..အမှန် က အားလုံးဟာ မီဒီယာ ဆင်လုံးတွေ ပါ။.တကြိမ်မိလျှင်..လိမ်သူ အပြစ်။ အကြိမ်ကြိမ် အလိမ်ခံရရင်..လိမ်သူ အပြစ်မဟုတ် ယုံကြည်သူ၏ ရိုးအမှု ညံ့ဖျင်းမှု သာဖြစ်ပါ၏။
လောလောဆည်တော့ မင်းမော်ကွန်း ကဒုတ်ရပြီး..ဒေါ်စု က အင်းစိန်ထောင်ထဲ ကုပ်ကုပ်ကလေး အိပ်နေရဆဲဖြစ်၏။ အမျိုး အချင်းချင်း အိုးမည်းသုတ် ကြက်တိုက်နေသော လက်သည်ဒိုင်ကတော့ ကိုယ်ပျောက်နေဆဲ ဖြစ်၏။
ထပ်လာပါလိမ့်ဦးမယ်..ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ..ငွေရောင်ပိတ်ကားဆီ ဆက်လက်စောင့် ကြည့်နိုင်ပါသည်။ http://thadar.blogspot.com/2009/08/blog-post.html မှ
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Wednesday, August 05, 20090comments
၂၁ နှစ် နွံထဲက ဗမာပြည် (သို့ ) လူသတ်အုပ်စုလက်ထဲက ဗမာပြည်
နေ၀င်းနဲ့စစ်ဝါဒီတွေရဲ့၁၉၆၂ခုမတ်လ(၂)ရက်အာဏာသိမ်းပွဲ၊ဇူလိုင်(၇/၈)ရက်ကျောင်းသားသတ်ပွဲနဲ့ကျောင်းသားသမဂ်ဂအဆောက်အဦီဖြိုဖျက်ပွဲ၊၁၉၇၄ဇွန်အလုပ်သမားအရေးအခင်း၊ ၁၉၇၄ဦးသန့်ဈာပန၊၁၉၇၅အလုပ်သမားအရေးအခင်း၊၁၉၇၆မှိုင်းရာပြည့်ပွဲကနေ၊၁၉၈၈မတ်လ(၁၃)RITကျောင်းသားတွေကိုသတ်တဲ့ပွဲအထိနေ၀င်းရဲ့ရက်စက်မှုတွေကိုဆန့်ကျင်ပေါ် ထွက်လာတဲ့ မျိုးဆက်-မျိုးဆက်တွေရဲ့ ဦးဆောင်မှု၊အာဏာရှင်တွေရဲ့ကိုယ်ကျိုးရှာမှု၊စီမံခန့်
ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးဖေါင်းပွမှု၊ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြည်သူတွေ ရဲ့စားဝတ်နေရေး၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးဘက်စုံမွန်းကြပ်လာမှုတွေပေါင်းစည်းပြီးရဟန်းသံဃာတွေ၊ရေတပ် လေတပ် စစ်သားတွေ၊ရဲတွေ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေ၊ အလုပ်သမားတွေ၊လယ် သမားတွေ၊ ပြည်သူတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ၊အိမ်ရှင်မတွေနဲ့မိန်းမလျှာတွေ ပါမကျန်ပါဝင်တဲ့၊ ရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံကြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊ဒါပေမဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေက လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကို ရန်သူနဲ့စစ်မြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တွေ့သလိုပဲ သဘောထားတုန့်ပြန်ခဲ့ တယ်၊ရက်ရက်စက်စက် ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲပြီး(ကနေ့ထိ)အာဏာကို လက်လွှဲအုပ်ချုပ်နေတုန်းပါပဲ၊ ရှစ်လေးလုံးလူထုအရှိန်အ၀ါကြောင့်မဖြစ်မနေလုပ်ပေးခဲ့ရတဲ့၊ပြည်သူလူထုတခဲနက်ဆန်ဒပြုခဲ့တဲ့၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကိုလည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြဖယ်ရှားရင်း၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာနဲ့ဖျောက်ဖျက်ဘို့ကြိုးစားနေပြန်ပါတယ်၊တို့ဗမာသီချင်းထဲက“တို့ခေတ်တွင်မှညံ့ ကြတော့မှာလား”ဆိုတဲ့စာသားကိုသတိရမိပါတယ်၊ကျွှန်တော်တို့ပြည်သူတွေဒီလိုပဲနေလို့ ဖြစ်ပါ့မလား….? ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွေဟာနယ်ချဲ့တွေဖက်စစ်တွေရဲ့နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်ကျော်ကျွန်ပြုခံခဲ့ရတာကနေလွတ်မြောက်ပြီးဘယ်လောက်မှမကြာသေးဘူး၊နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ဂိုဏ်းဃနအစွဲ၊လုပ်ရပ်အလွဲတွေကြောင့်ပြည်တွင်းစစ်ဒါဏ်ကိုဆက်ခံခဲ့ကြရတယ်၊အခွင့်အရေးကိုချောင်းနေတဲ့နေ၀င်းနဲ့စစ်ဝါဒီတွေရဲ့အာဏာသိမ်းမှုခံရပြီးကနေ့ထိစစ်တပ်ရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုကိုခံနေကြရတယ်၊စစ်တပ်ကပါးရိုက်ရင်လဲခံရ၊မုဒိန်းကျင့်ရင်လဲခံရ၊ကြက်ဆွဲဝက်ဆွဲလုယက်
ဆင်ပေးနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာကိုယ့်သားသမီးကိုကိုယ်ဈေးပေါပေါအ၀တ်အ စားတောင်တစ်လတခါမဆင်ပေးနိုင်ကြပါဘူး၊ကျေးလက်နေပြည်သူတွေရဲ့ကလေးတွေဆိုဘိ နပ်တောင်မစီးကြရတာတွေအများကြီးပါ၊စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကသူတို့သားသမီးတွေကိုကွန်ပြူ တာသင်တန်း၊စာရင်းကိုင်သင်တန်း၊Englishစာ/စကားပြောသင်တန်း၊ကိုရီးယားစာ/စကားပြော
သင်တန်း၊ဂျပန်စာ/စကားပြောသင်တန်း၊တရုပ်စာ/စကားပြောသင်တန်း၊သင်တန်းအမျိုးမျိုး တွေတက်ခိုင်း၊နိုင်ငံတကာလွှတ်ပညာတွေသင်ခိုင်းနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာ ကိုယ့်သားသမီးကိုဆယ်တန်းအောင်တဲ့အထိကျောင်းထားဘို့အနိုင်နိုင်ပါ၊ကျေးလက်နေပြည်သူတွေရဲ့ကလေးတွေဆိုရေးတတ်ဖတ်တတ်ပြီးရင်ကျောင်းထွက်အလုပ်လုပ်ကြရတာများပါ တယ်၊စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကသူတို့သားသမီးတွေကိုတရုပ်အစားအစာ၊ထိုင်းစာ၊ဥရောပစာတွေ
ဘို့သိန်းထောင်ကျော်တန်ကားတွေလေးငါးစီးစီရှိနေချိန်မှာ၊ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာကြပ် ကြပ်တည်းတည်းအတင်းတိုးဝှေ့စီးရတဲ့ဘတ်စ်ကားတောင်လောက်ငှမှုမရှိပါဘူး၊စစ်ဗိုလ်ချုပ် တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေခေါင်းမူးဗိုက်နာဘာမဟုတ်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေလောက်ကိုအထူးကု ဆေးရုံကြီးတွေမှာပါရဂူတွေသမားတော်ကြီးတွေနဲ့ပြကုသနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာသေလုမျောပါးရောဂါတွေကိုကုဘို့ဈေးအနည်းဆုံးဆေးရုံပြဘို့တောင်မတတ်နိုင်ကြပါဘူး
စရိတ်မျှပေးကျန်းမာရေးလို့ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်ဆေးရုံတွေမှာလည်းပြည်သူတွေအတွက်ဘာဆေးမှမရှိပါဘူး၊ဆရာဝန်တွေရေးပေးလိုက်တဲ့ဆေးစာရွက်လေးကိုင်ပြီးပြင်ပဆေး ဆိုင်တွေမှာကိုယ်ဘာသာပဲဝယ်ကြရတာပါ၊ဆေးဘိုးမတတ်နိုင်လို့မသေသင့်ပဲသေခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေလဲများလှပါပြီ၊စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအိမ်မှာတီဘွီ၊အဲယားကွန်း၊ရေခဲသေတ်တာ၊အ၀တ် လျှော်စက်စတဲ့ဇိမ်ခံပစ်စည်းတွေအတွက်၂၄နာရီမီးလင်းနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ မှာသားသမီးတွေစာကျက်ဘို့မဖြစ်မနေအသုံးပြုဘို့တောင်တနေ့ခြောက်နာရီပြည့်အောင်မီး
အမွေ - -------------------ကိုဒေါင်းနီ မှပေးပို့ သည်
ကျနော်ကတော့ အမွေဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ ကျနော့်ရဲ့အယူအဆကို ဖွင့်ဟချင်ပါတယ်။ သားသမီးဆိုတာ မိဘရဲ့ ကောင်းမွေ၊ ဆိုးမွေကို ခံယူရစမြဲပါ။ ဒီလိုပါပဲ လူ့အဖွဲ့အစည်းတခုမှာလည်း မျိုးဆက် တဆက်ပြီးတဆက်၊ ကောင်းမွေ၊ ဆိုးမွေတွေကို လက်ဆင့်ကမ်း ထိန်းသိမ်းသယ်ဆောင်နေကြ တာပါပဲ။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံတော် သီချင်းမှာကိုက "… ဒို့ဘိုးဘွား အမွေစစ်မို့ ... ချစ်မြတ်နိုးပေ.." လို့ ပါရှိနေတာပါပဲ။ အမွေကို လူတိုင်း နှစ်သက်လိုလားကြပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ စရိုက်၊ အစဉ်အလာတွေကို ကောင်းမြတ် တဲ့ အမွေ တခု အဖြစ် ကျနော်တို့ အစဉ်အဆက် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် လာခဲ့ကြတာပါပဲ။
ဒီလိုပါပဲ။ ကိုယ့်မိဘရဲ့ လက်ငုတ်လက်ရင်း၊ အတတ်ပညာ၊ ဂုဏ်ပုဒ် စသည်ဖြင့် မိမွေ၊ ဘမွေကို သားသမီးတွေက မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ ဆက်ခံတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလမ်းကြောင်းကနေ ချော်ထွက် သွားတာလည်း ရှိကြတာပေါ့။ ကျနော်ပြောချင်တာက အမွေဆိုတဲ့နေရာမှာ ကောာင်းတဲ့၊ သင့်
တော်တဲ့ အမွေမျိုးရှိသလို ဆိုးတဲ့၊ မခံယူသင့်တဲ့အမွေလည်း ရှိတာပါပဲ။ ဥပမာအနေနဲ့ အရက်သမား လူရမ်းကားတယောက်ရဲ့သားဟာ သူ့ဖအေ အရက်သမား လူရမ်းကားလိုပဲ အမွေဆက်ခံပြီး အရက်သမား လုပ်ရမှာလား။ ဘယ်သူမဆို ဒီလိုအဖြစ်မျိုးကို လက်မခံဖို့ဘဲ ပြောကြမှာပါ။ လက်သင့် မခံရ မယ့် အမွေမျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာလည်း မျိုးဆက်သစ်များအနေနဲ့ လက်မခံရမယ့်အမွေတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ အဘိုးအဘွားတွေဟာ သူ့ ကျွန်ဘ၀ကနေ လွတ်မြောက်အောင်၊ ကျနော် တို့လို မျိုးဆက်သစ်တွေအနေနဲ့ လွတ်လပ်တဲ့လူမျိုး၊ လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်အောင် သူတို့ ပခုံး နဲ့ ထမ်းပြီး တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကြီးမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေ၊ လေးစားအတုယူအားကျဖွယ် စိတ်ဓာတ်တွေ၊ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံရဲတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ အသက်၊ သွေး၊ ချွေးများစွာရင်းပြီး ငါတို့ နောင်လာနောက်သား မျိုးဆက်သစ်တွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေရပါစေတော့ဆိုတဲ့ စေတနာ အရင်းခံနဲ့ တွန်းတင် ပေး ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ခေတ်၊ သူတို့ကာလအနေနဲ့ သူတို့နိုင်တဲ့ဝန်ထက် အဆပေါင်းများစွာ မနိုင်ဝန်ထမ်းပြီး ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတာပါ၊ ပေးဆပ်သွားကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကိုဆက်ခံတဲ့ သားသမီးတွေကတော့ တာဝန်မကျေခဲ့ပါဘူး။
လူငယ်ဟာ လူကြီးရဲ့ပခုံးပေါ်ကိုတက်ပြီး ကြည့်ရမယ်လို့ ဖတ်ဖူး၊ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ ဒါမှလည်း မျိုးဆက် တဆက်ပြီးတဆက် တိုးတက်တော့မှာပါ။ မိဘ ဘိုးဘွားတွေ ထားရစ်ခဲ့တဲ့ ကောင်းမြတ်တဲ့ အမွေကို နောက်မျိုးဆက်တွေက ဆတက်ထမ်ပိုးတိုးအောင် ကြံဆောင်ကြိုးပမ်းမှုမရှိဘဲ အစိတ်စိတ် အမြွှာမြွှာ ခွဲပြီး သူများတယ်၊ ငါများတယ်နဲ့ အမွေလုနေရင်းနဲ့ပဲ တစတစ လုံးပါးပါးပြီး နောက်ဆုံး ဆင်းရဲမွဲတေရတဲ့အဖြစ်ကို ရောက်ခဲ့ရတာလို့ မြင်မိပါတယ်။ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေကြား မထား သင့်တဲ့၊ မလိုလားအပ်တဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ အာဃာတတွေ၊ တကိုယ်ကောင်းဆန်မှု၊ အတ္တကြီးမှုတွေ ကြောင့် စိတ်ဝမ်း ကွဲပြီး မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်လာရတာပါ။ တဦးတယောက်၊ တဖွဲ့တသင်းက အာဏာကို လက်ဝါးကြီးအုပ် ဗိုလ်မကျဘဲနဲ့ အားလုံး ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်း ၀ိုင်းဝန်း တိုင်ပင် လို့ ညီညီ ညွတ်ညွတ်နဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရင် အခုလောက်ဆိုရင် ကျနော်တို့ဘိုးဘွားတွေရဲ့အမွေဟာ အတိုင်းထက်အလွန်တိုးပွားလို့ ပေးဆပ် သွား ခဲ့ရတဲ့ သူတွေလည်း ရောက်ရာဘ၀ကနေ သာဓုခေါ် နေကြမှာပါ။
အခုတော့ မိဘဘိုးဘွားတွေထားခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးကိုလည်း ဆပ်ရာမရောက်၊ နောင်လာနောက်သား မျိုးဆက်တွေအတွက်လည်း ဘာတခုမှ အမွေခံ ကောင်းတွေ ချန်မထားရစ်ဘဲ မကောင်းတဲ့အကျင့် ဆိုးတွေ၊ စိတ်ဓာတ်တွေ၊ အယူဆိုးတွေ၊ စနစ်ဆိုးတွေပဲထားခဲ့လို့ အခုလက်ရှိ ကျနော်တို့မျိုးဆက် တွေလည်း ဒီအမွေဆိုးတွေရဲ့ဆိုးကျိုးကို ခံစားနေကြရပါပြီ။ ကြွေးဟောင်းလည်းမကြေ၊ ကြွေးသစ် လည်းမချနိုင်နဲ့ ရှိရင်းစွဲအမွေလေးပါ ချွတ်ခြုံကျနေရတဲ့ အဖြစ် ကို ရောက်နေရပါပြီ။ လွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံသား၊ လွတ်လပ်တဲ့လူမျိုးအဖြစ်နဲ့ အများအလယ်မှာတောင် မော်မကြွားဝံ့ပါဘူး၊ ဂုဏ်ယူ စရာလည်း တချက် မှမရှိပါဘူး။ ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ဘိုးဘွားဘီဘင်တွေ လုပ်ထားခဲ့တဲ့ ကောင်းမှု လေးတွေ၊ အမွေကောင်းလေးတွေကြောင့်သာ နည်းနည်းခံသာနေရတာပါ။
မွေးချင်း တယောက်ရဲ့ အကျင့်ဆိုးကို ကျန်တဲ့ မွေးချင်းညီအစ်ကိုများက ၀ိုင်းဝန်းပြုပြင်မပေးနိုင်ခဲ့ ပါဘူး။ လမ်းမှား ရောက်နေလည်း ပြန်မဆွဲခေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီလို လုပ်နိုင်တဲ့အင်အားလည်းမရှိဘဲ ကျန်သူများလည်း အချင်းချင်း ဝေစုမတည့်ဖြစ်နေပြီး အချိန်ကုန်ခဲ့တာပါ။ ဒီလိုဖြစ်နေစရာလား။ ဘာလို့ အဲဒီလို ဖြစ် နေခဲ့ တာလဲ။ အမွေကိုကောင်းအောင်၊ ကြီးကျယ်ပွားစီးအောင်လို့ လုပ်ချင်စိတ် မရှိခဲ့လို့လား။ နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်ရော မစဉ်းစားခဲ့ဘူးလား။ ဟန်ပြဖုံးကွယ်မှုတွေ၊ သကာ ရည်လောင်းထားတဲ့ အနှစ်မရှိတဲ့ မက်လုံးတွေ၊ မစားရ၀ခမန်း လုပ်ကြံထားတဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေကို ခင်းကျင်းပြီး ဟုတ်လိမ့်နိုးနိုးနဲ့သာ ရွှေပြည်တော်မျှော်တိုင်းဝေးစေခဲ့ပါတယ်။
တိုင်းပြည်အတွက်၊ လူမျိုးအတွက်ဆိုတဲ့ စကားလုံးလှလှလေးတွေသုံးပြီး တကယ်တမ်းကျတော့ ငါ့ဘို့ဆိုတဲ့ ဘို့တဘို့တည်း ကြည့်သွားခဲ့ကြတာပါ။ တကယ်တမ်းကောင်းအောင်၊ တိုးတက်အောင် လုပ်ချင်တဲ့စိတ် မရှိခဲ့ကြပါဘူး။ ရှိခဲ့ရင်လည်း အဲဒီစိတ်က တပြား၊ နှစ်ပြားဖိုးထက် မပိုပါဘူး။ "ရနိုင် သမျှ ချကြ"၊ မင်းအလှည့်ရောက်ရင် မင်းလုပ်၊ ငါတို့တုန်းက ဘယ်လို၊ ဘယ်လို စွန့်လွှတ်ခဲ့တာ၊ ဘယ်လိုတိုက်ယူခဲ့ရတာဆိုပြီး နောက်လူတွေအတွက် မကြည့်ခဲ့ကြပါဘူး။
ကိုယ်ချင်းစာစိတ်၊ ပရဟိတစိတ် မရှိခဲ့ကြပါဘူး။ လူဆန်တဲ့နှလုံးသားတောင် မရှိခဲ့ကြပါဘူး။ အဲလို လူတွေက နောက်လူတွေကို ပေးသွားတဲ့အမွေက ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက် မျိုးဆက်တွေကလည်း ဒီလို အယူဆိုး၊ အကျင့်ဆိုးတွေ၊ အမွေဆိုးတွေကို အလျားသင့်ပဲ ဆက်ခံကြပါတယ်။ ကောင်းအောင် လုပ်ဖို့၊ တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့၊ ပျက်စီးနေတာကိုပြင်ဖို့၊ မဖြစ်သင့်တာတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတာ ဝေလာဝေး၊ သူ့ထက်ကဲ၊ ရွှေပြည်စိုးဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တွေပဲဖြစ် တာကြောင့် ဘိုးဘွားအမွေအနှစ်ကို ဆေးသကြားနဲ့ ထပ်မံအုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ့်နောက်မှ လူဖြစ်လာကြတဲ့သူတွေ (နောက်မှ လွတ်လပ်ရေးရကြတဲ့သူတွေ) က ကိုယ့်ကို ထိပ်ပုတ်သွားတာ ခံနေရပြီ။ အိမ်ထောင်ဦးစီးတယောက်က လူရမ်းကားဖြစ်နေလို့ သူ့သားသမီး တွေက လူရမ်းကားသားသမီးတွေလို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကပြောတာ ခံနေရပါပြီ။ လူဘုံအလယ်မှာ အရှက်ရနေပါပြီ။ လူမလေး ခွေးမခန့် ဖြစ်နေပါပြီ။ တကယ်ဆို ကျနော်တို့မျိုးဆက်တွေအနေနဲ့ အဲလို အပြောခံသင့်သလား။ ကျနော်တို့မှာ ဘာအပြစ်ရှိလို့လဲ။ ဒီပြဿနာတွေက ကျနော်တို့ လုပ်ခဲ့တာဟုတ်လို့လား။ ကျနော်တို့ နောက်မျိုးဆက်တွေနဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ။ ကျနော်တို့မမွေးခင်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာတွေရဲ့ အကျိုးဆက်တွေကို ကျနော်တို့က ဆက်ခံရမှာလား။ မိဘရဲ့ ကောင်းမွေ၊ ဆိုးမွေကို လက်ခံရတယ်ဆိုပေမယ့် ဒါမျိုးကို လက်သင့်ခံသင့်သလား။ ဆိုးမွေကို ဘာလို့ယူမှာလဲ။ ကျနော်တို့မလုပ်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာတွေ၊ အမွေဆိုးတွေကို ဆက်ခံပြီး ဒီလိုပဲ သူ့ဘက်၊ ကိုယ့်ဘက် ဆက်ချနေကြမလား။ အမွေလုနေကြဦးမှာလား။
ဟိုတုန်းက ၀တ္ထုတအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ဖူးတယ်။ အခု စာရေးဆရာကော၊ စာအုပ်နာမယ်ကော စဉ်းစားလို့မရတော့ဘူး။ ဘာလဲဆိုတော့ "တို့ခေတ်တုန်းက လူငယ်တွေက တိုင်းပြည်အတွက် ဘာပေးရမလဲဆိုတာပဲ စဉ်းစားကြတယ်တဲ့၊ အခုလူငယ်တွေက တိုင်းပြည်က ကိုယ့်ကို ဘာပြန် လုပ်ပေးမလဲဆိုတာပဲ စဉ်းစားကြတယ်" လို့ ရေးထားတာကို ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ဒီစာကြောင်းလေး တကြောင်းပဲ ပြန်အမှတ်ရပါတယ်။ ကြိုက်လွန်းလို့ပါ။ ဒီစာလိုပဲ ကျနော်တို့လူငယ်တွေ ဖြစ်နေပြီ လား။ မှန်သင့်သလောက်တော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့လိုချင်တာက အမွေခံကောင်း လေးတွေပါ။ သားသမီးကတော့ မိဘဆီက ဆင်းရဲရဲ၊ ချမ်းသာသာ အမှတ်တရပဲဖြစ်ဖြစ် အမွေ ပစ္စည်းလေးတော့ လိုချင်တာပါပဲ။ မတတ်နိုင်မှန်းသိရက်နဲ့တော့ ဇွတ်မတောင်းပါဘူး။ အမွေဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ထိုက်မှ ကိုယ်ရတာပါ။ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ဟိုအခွင့်အရေး၊ ဒီအခွင့်အရေး၊ မတောင်းပါဘူး။
ကျနော်တို့လူငယ်တွေမှာ ကြိုးစားချင်စိတ်၊ စွန့်လွှတ်ချင်စိတ်၊ အနစ်နာခံချင်စိတ်၊ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးတဲ့စိတ်၊ တက်ကြွတဲ့စိတ်၊ နိုင်ငံအတွက်၊ တိုင်းပြည်အတွက် ပေးဆပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေ အပြည့် ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူမျိုးတိုင်း၊ လူမျိုးတိုင်းက လူငယ်တွေရဲ့ စိတ်ထားပါပဲ။ လူကြီး တွေလည်း တချိန်တုန်းက ဒါမျိုးရှိခဲ့တာပဲ။ အခု အဲဒါတွေကို သတိမရတော့ဘူးလား။ အမှန်တရား မြတ်နိုးပြီး လောကကောင်းကျိုးကို လူ့ဘ၀ရတုန်းမှာ သယ်ပိုး သွားမယ်လို့ စိတ်မရှိကြတော့ဘူးလား။ ကျနော်တို့လူငယ်တွေဟာ မိမိတို့ရဲ့အနာဂတ်ကို ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ လျှောက်လှမ်းချင်ပါတယ်။ ကျနော် တို့ရဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေ ရှင်သန်ပေါက်ဖွားဖို့ ရေခံမြေခံ၊ အမွေခံကောင်းဖို့ လိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ကို တိုင်းပြည်က ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲလို့ မျှော်လင့်ရတာပါ။ ပန်းလေးတွေဟာ လူ့လောကကို အရောင်၊ အနံ့တို့နဲ့ အကျိုးပြုဖို့ ပွင့်ဖူးမလာခင်မှာ ရှင်သန်ကြီးထွားလာဖို့အတွက် မြေတို့ ရေတို့ လိုပါတယ်။ အခု အနာဂတ်ပန်းတွေ ရှင်သန်ဖို့အတွက် ရှေးဘိုးဘွားအမွေအနှစ် မြေဆီ ရှိနေပါပြီ။ ဆက်လက်ပွင့်လန်းဖို့အတွက် ရေနဲ့တူတဲ့ အခု တိုင်းပြည်ကပံ့ပိုးပေးမယ့် အမွေ လိုပါတယ်။ ဒါ ငါတို့ရတဲ့အမွေကွဆိုပြီး လူဘုံအလယ်မှာ မျက်နှာ ပန်းလှချင်ပါတယ်။ တိုင်းပြည် အတွက် ဂုဏ်ယူချင်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်အကျိုးကိုလည်း ဆတက်ထမ်ပိုးတိုးပြီး ထမ်းဆောင်ချင် ပါတယ်။ ကျနော်တို့က ဖြစ်လာမယ့် မျိုးဆက်တွေ ကိုလည်း အမွေခံကောင်းတွေ၊ အခြေခံကောင်း တွေသာ ပေးထားရစ်ခဲ့ချင်ပါတယ်။
အစွမ်း ကုန်ဖူးပွင့်ချင်ပေမယ့် မြေခံ၊ ရေခံ၊ အမွေခံမကောင်းရင်တော့ မည်သည့်အနာဂတ်ပန်းမျှ လှပ လာမည် မဟုတ်ပါ။ ဒီလိုဆိုရင် နောက် နောင်မျိုးဆက် တွေ မှာ ပို၍ဆိုးရွားဖွယ်သာ ရှိပါတော့တယ်။ မျိုးစေ့မမှန်လို့ ပင်မသန်ရတာမဟုတ်ဘဲ အထိန်းအသိမ်းမတတ်လို့ ပျက်စီးရခြင်းသာဖြစ် ပါကြောင်း။ ။
အဝေးရောက်မြန်မာတဦး (ခေါင်းစဉ်ပေးထားတာကတော့ အမွေတဲ့)
လမ်းပြင်ရန်အချိန်မရှိ တွင်းတူးဖို့ သာစိတ်ဝင်စား
ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ယာဉ်တန်ချိန် ထက်ဝက်ကျော် လျှော့ချ နန်းဒေဝီ အင်္ဂါနေ့၊ သြဂုတ်လ 04 ရက် 2009 ခုနှစ် 15 နာရီ 33 မိနစ်
နယူးဒေလီ (မဇ္စျိမ)။ ။ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းအတွင်း အဝေးပြေး ကုန်တင်ကားများအနေဖြင့် ကုန်တန်ချိန်ကို ထက်ဝက်ကျော် လျှော့ချရန် ဆောက်လုပ်ရေးဌာနက ညွှန်ကြားလိုက်သည်။
တောင်ကြီး-ကလော-သာစည်အကြား ပြေးဆွဲသည့် ကုန်တင်ကားများဖြစ်သည့် ၁ဝ-၁၂ ဘီးကားများအား ယခင်က ကုန်တန်ချိန် ၄၀ ကျော် ခွင့်ပြုထားရာမှ ယခုအခါ ၁၉ တန်အထိ (ယာဉ်တန်ချိန်-၁၄ တန်နှင့် ကုန်ပစ္စည်း ၅ တန်) လျှော့ချရန် ဇူလိုင်လ နောက်ဆုံးပတ်အတွင်းက ညွှန်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“အခုက ပိဿာချိန် ၁ သောင်းကျော်ပဲ တင်ခွင့်ပေးတော့တယ်။ အရင်ကတော့ ၂ သောင်းအထိ (၄၀ တန်) တင်ရတယ်” ဟု ကလော-တောင်ကြီး ကုန်စည်တင်ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်သည့် ကိုထွန်းထွန်းနိုင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ထိုကဲ့သို့ ကုန်စည်လျှော့ချ သယ်ဆောင်ရသောကြောင့် အဝေးပြေးယာဉ်များ တွက်ချေမကိုက်ဖြစ်ကာ ယာဉ်ပြေးဆွဲမှု နည်းပါးသွားကြောင်း သိရသည်။
“တချို့ကုန်တင်ယာဉ်တွေ မကိုက်တော့ နားနေကြပြီ။ ကုန်တင်ကားထွက်တာ နည်းလာတော့ ပစ္စည်းတွေက ဈေးတင်ရမလို ဖြစ်နေတယ်။ အသေအချာ၊ တိတိကျကျ ညွန်ကြားတာလည်း မရှိတော့ ကျနော်တို့ ဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိတာ။ ကုန်တင်ကားပိုင်ရှင်တွေကလည်း ပိုက်ဆံအရ နည်းတော့ မထွက်ချင်ကြတော့ဘူး” ဟု ကိုထွန်းထွန်းနိုင်က ပြောသည်။
အဝေးပြေးလမ်းများ ပျက်စီးနေသော်လည်း တောင်ကြီးမြို့တောင်ခြေရှိ အေးသာယာနှင့် ဘုရားငါးဆူ ပြည်ညောင် (မန္တလေး) ကြားအထိ ၆ ဘီးကားများဖြင့် သယ်ဆောင်နိုင်ပြီး၊ ထိုမှတဆင့် သာစည်မြို့အထိ ၁၀-ဘီး -၁၂ ဘီးကားများဖြင့် ပြောင်းလဲတင်ဆောင်နိုင်ကြောင်း အင်းစိန်-ဂျပန်လမ်းရှိ အဝေးပြေး ကုန်စည်တင်ဌာနက ပြောသည်။
ထို့အပြင် ဆောက်လုပ်ရေးက တာဝန်ယူဆောက်လုပ်ခဲ့သည့် တောင်ကြီးမြို့အတွင်းရှိ ရပ်စောက်-တောင်ကြီး-ဟိုပုန်း အဝေးပြေး ကားလမ်းမကြီးများသည် ပျက်စီးနေပြီး ယနေ့တိုင် ပြင်ဆင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
“အဲဒီလမ်းကြောင်းတွေက တလမ်းမောင်းတွေဆိုတော့ လမ်းကဆိုးတယ်။ ဒီလို မိုးတွင်းဆို ပိုဆိုးတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒီ တောက်လျှောက်လမ်းတွေက ဆောက်လုပ်ရေးက တာဝန်ယူလုပ်ထားတာ။ ဘယ်လိုမှ မပြင်ကြတော့ အခုလို ဆက်ဖြစ်နေတာ” ဟု ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန်-ဂျပန်လမ်းရှိ အဝေးပြေးကုန်စည်တင်ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့်လကုန်ပိုင်းက တောင်ကြီး-ကလော-သာစည် အဝေးပြေး လမ်းမအကြား ယာဉ်တန်ချိန် ကန့်သတ်ခဲ့သော်လည်း ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းများ မပါဝင်သေးကြောင်း သိရသည်။
၄၃၂ မိုင် ကွာဝေးသည့် ရန်ကုန်-မန္တလေး လမ်းမအကြား ပြေးဆွဲနေသည့် အဝေးပြေး ကုန်တင်ကားအရေအတွက် တိုးပွားပြီး၊ မြို့ဝင်ကြေး၊ တံတားဖြတ်ခ၊ ကတ္တားချိန်ခတို့ ပေးဆောင်ရသဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်များကာ အမြတ်ငွေ ထိုးကျလာသည်ဟု အင်းစိန်-ဂျပန်လမ်းရှိ ကုန်စည်တင်ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
သူက “အရင်က ပစ္စည်းတင်တဲ့အခါ တပိဿကို ၄၀-၅၀ အေးရှားဝေါလ်၊ ရွှေသံလွင်၊ ယုဇန၊ ဒဂုံ၊ အိုလံပစ်၊ ကမ္ဘောဇ စသည့် ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့များက သက်ဆိုင်ရာ နယ်မြေအလိုက် တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ဖြတ်သွားဖြတ်လာ မော်တော်ယာဉ်များသည် တံတားခ၊ ဂိတ်ခ၊ ကတ္တားခအပြင် မြို့အဝင် အခကြေးငွေများကို သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီများထံ ပေးဆောင်ကြရသည်။
“တံတားဖြတ်ခ၊ ကတ္တား (ကုန်စည်) ချိန်ခ၊ မြို့ဝင်ကြေးတွေ ပေါင်းလိုက်တော့ ၁ သိန်း ၈ သောင်းကျော် ပေးရတယ်။ အဲဒါတောင် ယာဉ်မောင်းစရိတ်၊ စားစရိတ် မပါသေးဘူး။ ကတ္တားချိန်တဲ့ နေရာကိုက ၁၂ သင်းတောင် ရှိတယ်” ဟု ထိုကုန်စည်တင်ဌာနမှ တာဝန်ရှိသူက ပြောသည်။
Tuesday, 04 August 2009 16:44 ကိုထွေး
လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ မစုစုနွေးသည် အာဇာနည်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုသည့် အနေဖြင့် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် ရေးစပ်ထားသည့် သီချင်းတပုဒ်ကို သီဆိုခဲ့သည့် အတွက် ၃ ရက် တိုက်ပိတ် ခံခဲ့ရသည်။
စုစုနွေး၏ အစ်မဖြစ်သူ မဌေးဌေးကြည်က “ကျမ ဇူလိုင်လ ၂၁ရက်နေ့က သွားတော့ သူက တိုက်ပိတ်ခံရတာ ကနေ ပြန်လွတ်နေပြီ၊ အာဇာနည်နေ့ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင် ရေးတဲ့ သီချင်းကို ဆိုတာကြောင့်လို့ ပြောတာပဲ၊ သီချင်း ခေါင်းစဉ်တော့ မသိဘူး၊ လွတ်လပ်ရေး သီချင်းလို့ ပြောတယ်၊ ၃ ရက် တိုက် အပိတ်ခံ ရတယ်” ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးမြို့အကျဉ်းထောင်ရှိ မစုစုနွေး၏ ကျန်းမာရေးမှာ ဆိုးရွားခြင်း မရှိကြောင်း၊ သို့သော် ထောင်တွင်းတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လာရောက် စစ်ဆေးသူများမှာ တတ်ကျွမ်း နားလည်သော ဆရာဝန်များ မဟုတ်ဘဲ ဆေးမှူးများသာ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်ဟု ၎င်းက ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
မဌေးဌေးကြည်က “သွားတွေရတာက ဂန့်ဂေါ ဘက်က သွားရတော့ စရိတ်လည်း မတရား ကုန်တယ်၊ လူလည်း အရမ်း ပင်ပန်းတယ်” ဟုပြောသည်။
စက်တင်ဘာ လဆန်းပိုင်းတွင် ထပ်မံ သွားရောက်ရန် စီစဉ်ထားသည်ဟုလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သော မတ်လက အာရှ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် (AHRC) က ကလေးမြို့ အကျဉ်းထောင်သို့ ရောက်ရှိနေသော မစုစုနွေးကို ကျန်းမာရေး အခြေအနေအရ မိသားစုနှင့် နီးသည့် ဒေသ အကျဉ်းထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ပေးရန် မြန်မာ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးထံသို့ စာရေးသား ပေးပို့ တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ထိုစဉ်က မစုစုနွေး၏ ကျန်းမာရေး ဆိုးရွား၍ ကလေးမြို့ဆေးရုံတွင် ဆေးဝါး ကုသမှု ခံယူရကြောင်း သိရသည်။
မစုစုနွေးမှာ မွေးရာပါ နှလုံးရောဂါနှင့် လေးဘက်နာ ရောဂါတို့ကို ခံစားနေရသူဖြစ်ပြီး အာဏာပိုင်များ လိုက်လံ ဖမ်းဆီး၍ ရှောင်တိမ်းနေရစဉ် ကာလ အတွင်း ခွဲစိတ်ကုသမှု တကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ရသည်။
မစုစုနွေးသည် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင် တဦးဖြစ်သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ် ခွဲ ချခံထားရသူဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် အင်းစိန်ထောင်မှ ကလေးမြိ်ု့ထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်။
မစုစုနွေးသည် ရန်ကုန်တိုင်း၊ ကော့မှူးမြို့နယ်တွင် လုပ်အားပေး ခိုင်းစေသည့် ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်များကို တရားစွဲဆိုရာမှ ထင်ရှားသည့် ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူတဦး ဖြစ်လာသည်။
ထိုသို့ တရားစွဲခဲ့ရာတွင် အာဏာပိုင်များကို ခြိမ်းခြောက်သည်ဟု ပြန်လည်စွပ်စွဲခံရပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ပထမ အကြိမ် အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် မစုစုနွေးသည် ထောင်ဒဏ် တနှစ်ခွဲ ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။
ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှုများကြောင့် စစ်အစိုးရက မကြာခဏ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခဲ့သော မစုစုနွေးကို နိုင်ငံတကာက ဂုဏ်ပြုဆုများ ပေးအပ်ခဲ့သည်။
မစုစုနွေးသည် ကနေဒါနိုင်ငံမှ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့တဖွဲ့၏ John Humphrey ဆု၊ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ people in need အဖွဲ့က ပေးအပ်သည့် Homo Momini ဆု၊ အီတလီနိုင်ငံ၊ Agrate မြို့က ပေးအပ်သည့် ဂုဏ်ထူးဆောင်မြို့သားဆု တို့ကို ရရှိထားသည်။
အသက်တချောင်း ဆန်ကွဲဖွဲနုသို့ နယ် တန်ဖို့ တမျှနှင့်
နအဖ စစ်တပ်၏ ဆန်နှင့် တပ်သားသစ် လှဲလှယ်ရေး အစီအစဉ် အောင်မြင်မူရနေ 8/4/2009
မင်းအောင်(နိရဉ္စရာ) အိန္ဒိယ နယ်စပ်နှင့် ကပ်နေသော ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် နအဖ စစ်တပ်မှ မိသားစုများသို့ ဆန်နှင့် ငွေပေးပြီး တပ်သားသစ် စုဆောင်းနေသော စီမံကိန်းမှာ အောင်မြင်မူ ရနေသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
အမည်မဖေါ်လိုသူ အရပ်သား တဦးက အိန္ဒိယ နယ်စပ် သရော်အိုင်ကျေးရွာမှ ရခိုင်လူငယ် ၆ ဦးမှာ စစ်တပ်မှ မိသားစုများသို့ ငွေနှင့် ဆန်ထုတ်ပေးပြီးနောက် များမကြာမှီက နအဖ စစ်တပ်ထဲသို့ ၀င်ရောက် သွားသည်ဟု ပြောသည်။
နအဖ တပ်ထဲ ၀င်ရောက် သွားသည့် လူငယ် ၆ ဦးမှာ ဦးသိန်းအောင်၏သား ဘိုဝင်းထွန်း(၁၈) နှစ်၊ ဦးချင်းခိုင်၏သား အောင်အောင်သန်း (၁၈)နှစ်၊ ဦးမောင်ကျော်၏သား ကျော်ကျော်ဝင်း (၁၈)နှစ်၊ ဦးအောင်ထွန်းဦး၏သား အောင်သိန်း (၂၀)နှစ်၊ ဦးချင်းချေ၏သား ဖိုးသိန်းကျော် (၁၈) နှစ်နှင့် ဦးအောင်ထွန်းခိုင်သား မောင်လုံး (၁၇) နှစ်တို့ဖြစ်ကြသည်။
အစားအစာ ရှားပါးမှုကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး နအဖ စစ်တပ် တပ်ရင်းများမှ အိန္ဒိယ နယ်စပ် အနီးတွင် နေထိုင်သော ရခိုင်၊ ချင်း၊ မြိုနှင့် ခမီး စသည့် လူငယ်များကို စည်းရုံးနေသည့် အတွက် ရခိုင်လူငယ် ၆ ဦး ယခုကဲ့သို့ စစ်တပ်ထဲကို ၀င်ရောက်သွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု သူက ပြောသည်။
အဆိုပါ လူငယ်များထဲမှ တချို့မှာ ပလက်ဝမြို့နှင့် သရော်အိုင်ကျေးရွာအကြား ပြေးဆွဲနေသည့် စက်လှေများတွင် အငှားလိုက်နေ သူများဖြစ်ကြပြီး ရလာသော လစာဖြင့် မိသားစု စားဝတ်နေရေးကို မဖြေရှင်းနိုင်ဘဲ ရှိနေကြသည့် လူငယ်များ ဖြစ်ကြသည်ဟု သိရသည်။
ယခု တပ်ထဲ ၀င်ရောက်သွားသူများမှာ ပညာအရည် အချင်း ၃ တန်းထိသာ ရှိသူများဖြစ်ကြပြီး ထိုအထဲမှ မောင်လုံးမှာ လုံးဝ ကျောင်းမနေဖူးသူ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သူတို့ ၆ ဦးကို ယခုအခါ ပလက်ဝ တပ်ရင်း ၂၈၉ သို့ ပို့ဆောင်လိုက်ပြီး ပလက်ဝမှ တဆင့် စစ်တွေစုဆောင်းရေးသို့ ပို့ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
လွန်ခဲ့သော ရက်အနည်းငယ် ကလည်း အဆိုပါဒေသအတွင်း ခမီးအမျိုးသား လူငယ်များကို ဆန်ပေး စည်းရုံးသည့်အတွက် ပြင်တိုင်း ကျေးရွာမှ လူငယ် (၃) ဦးမှာ စစ်တပ်ထဲသို့ ၀င်ရောက်သွားကြသည်။
၀င်ရောက်သွားသော လူငယ် (၃) ဦးမှာ ဦးကိုးရစ် (ကွယ်လွန်) ၏သား ပြိုအောင် (အသက် ၂၁ နှစ်)၊ ဦးအိုလံ (ကွယ်လွန်) ၏သား ထွန်းလင်း (၁၉ နှစ်) နှင့် ဦးကြီးဒေါင်၏သား ရာမူ ( ၂၀) တို့ ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ ပလက်ဝမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများတွင် အသက်၁၈ နှစ်နှင့် ၂၅ နှစ်အတွင်း လူငယ်များ၏ စာရင်းကို ဒေသခံ စစ်တပ် တပ်ရင်းများ ကောက်ယူနေသဖြင့် လူထုအတွင်း စိုးရိမ်မူများ အထူးတိုးပွားနေသည်ဟု သိရသည်။
အပစ်ရပ်များအပေါ် ပိုမိုဖိအားပေး ထိန်းချုပ်ရန် ရပခ စစ်တိုင်းရုံး အရေးပေါ်စည်းဝေး
အင်္ဂါနေ့၊ 04 သြဂုတ်လ 2009 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
အပစ်ရပ်သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSA မြောက်ပိုင်း ထိန်းချုပ်နယ်မြေနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ဒေသတ၀ိုက်အခြေချ တပ်စိုက်ကြ သည့် တပ်ရင်းမှူး၊ တပ်ခွဲမှူးများအား အရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် အောင်သန်းထွဋ်က အစည်းအဝေး ဆင့်ခေါ်ခဲ့သည်ဟု သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း သတင်းရပ်ကွက်က ဆိုသည်။
“သြဂတ်စ် ၂ ရက်နေ့တုန်းက လားရှိုးစစ်တိုင်းရုံးမှာ အစည်းအဝေးလုပ်တယ်။ တပ်ရင်းမှူး တပ်ခွဲမှူးတွေ ၈၀ လောက် တက်တယ်။ အထူးသဖြင့် အပစ်ရပ်မြောက်ပိုင်း SSA နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ဒေသမှာစခန်းချကြတဲ့ တပ်မှူးတွေဆိုဘဲ။ မြို့နယ် စရဖ တပ်ဖွဲ့မှူး တွေလဲပါတယ်။ ”- ဟု စစ်တိုင်းရုံးအရာများနှင့် ၀င်ဆန့်သည့်အမည်မဖေါ်လိုသူတဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့် သို့ ပြောပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် - အပစ်ရပ်များအပေါ်ထားရှိသည့် နည်းဗျူဟာသစ် ထပ်မံချမှတ်ကြောင်း၊ ဗိုလ်မွန်းဦးဆောင်သော (တန့်ယန်းမြို့နယ်) မန့်ပန်ဌာနေ ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့၊ လောဝ်မားဦးဆောင်သည့် (မိုင်းရယ်မြို့နယ်) မိုင်းဟဌာနေပြည်သူ့စစ် တပ်ဖွဲ့များအား နအဖ တပ်နှင့်အတူ အပစ်ရပ်နယ်မြေအတွင်း ထိုးဖေါက် စခန်းချခိုင်းရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ပြောဆိုမှာကြား ခဲ့သည်ဟုဆို၏။
“ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့တွေကို နယ်မြေချဲ့ထွင် ထိုးဖေါက်ခိုင်းမယ့်နေရာတွေကတော့ မိုင်းရယ်မြို့အရှေ့ တောင်ဘက်တ၀ိုက် နဲ့ တန့်ယန်းမြို့နယ် မိုင်းကောဝ် အရှေ့ဖက် သံလွင်မြစ်အနောက်ဖက်ကမ်းတလျှောက် - အပစ်ရပ် SSA - N တပ်မဟာ (၁) နယ်မြေထဲအထိလေ ”- ဟု ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းပိုင်းနှင့် ရင်းနှီးသည့် ပုဂ္ဂိုလ်တဦးက ဆိုသည်။
ထို့အပြင် အပစ်ရပ် SSA မြောက်ပိုင်းထိန်းချုပ်နယ်မြေနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်နယ်ခြားတလျှောက်၌ စစ်အစိုးရအင်အား ပိုမို ဖြည့်တင်း နေရာယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စခန်းဟောင်းများလည်း ပြန်လည်မွမ်းမံပြင်ဆင် တပ်ချရမည်ဟုဆိုကြောင်း၊ မိုင်းရယ်၊ တန့်ယန်း၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ် မှ စရဖ အရာရှိများလည်း အပစ်ရပ်များအပေါ် မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်ရမည် ဖြစ် ကြောင်း - အစည်းအဝေး၌ မှာကြားသည်ဟုဆို၏။
အခြားတဖက်တွင်လည်း စစ်အစိုးရ၏ နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရေးအစီအစဉ်ကို ခေါင်းခါငြင်းဆန်သည့် တရုပ် နယ်စပ်အခြေစိုက် UWSA ၀ တပ်ဖွဲ့၊ MNDAA ကိုးကန့်တပ်ဖွဲ့ ၊ NDAA မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့ ၊ NDAA ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် ၊ KIA ဒီမိုကရေစီသစ် တပ်မတော် - ကချင် တပ်ဖွဲ့များ၏ နယ်ခြားတလျှောက် စစ်အစိုးရတပ် အင်အားတိုးချဲ့ ဖြည့်တင်းမှုများနှင့် တပြိုင်တည်း စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးနည်းလည်း ပိုမိုတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်လာနေကြောင်း အပစ်ရပ်အဖွဲ့ များနှင့် အ၀င်အထွက်ရှိသည့် ကုန်သည်တဦးက - ဆိုသည်။
“ဒေသခံလူထုနဲ့ အပစ်ရပ်ဒေသအတွင်း သွားလာလှုပ်ရှား ရောင်းဝယ်နေတဲ့ ကုန်သည်တွေ၊ လောင်းကစားသမားတွေ ကတော့ ပုံမှန်ဘဲ၊ ကွန်လုံ၊ ဟိုပန်၊ ပန်လုံ ဖက်မှာရှိတဲ့ နအဖ ၀န်ထမ်းတွေကတော့ ‘တိုက်ပွဲဖြစ်လာရင် ပစ္စည်းတွေဘာတွေ သိမ်းဆည်းရွှေ့ပြောင်း လွယ်အောင် ပြင်ဆင်မှု မလုပ်ထားဘူးလား၊ ကျုပ်တို့တော့ အဆင့်သင့်ဖြစ်နေပြီ’ စတာတွေ တီးတိုးပြောနေတာကြားတယ်” - ဟုဆို၏။
အပစ်ရပ် SSA မြောက်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေ အရှေ့ဘက်တလွှား (သံလွင်မြစ်အနောက်ဘက်ခြမ်း) ကား၊ ၀ ဒေသ အနောက်ဘက်ခြမ်း နှင့် ကပ်လျက်တည်ရှိသောကြောင့် အင်အားတောင့်တင်းသည့် ၀ တပ်ဖွဲ့အားထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်လျှင် အပစ်ရပ် SSA မြောက်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့လည်း စစ်အစိုးရအဘို့ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေသဖြင့် SSA နယ်မြေအတွင်း ထိုးဖေါက် နေရာယူနိုင်ရန် အရေးကြီးသည်ဟု သုံးသပ်သူများ ပြောဆိုနေကြသည်။
Respect for the state and know who you are crossing
ကျောက်မီးသွေးသယ်မည့် ဖြတ်လမ်းကိစ္စ SSA အခွင့်ရယူရန်လို တနင်္လာနေ့၊ 03 သြဂုတ်လ 2009 သျှမ်းသံတော်ဆင့်
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Tuesday, August 04, 20090comments
ငါသမားများအတွက် ကိုကောင်းကင်ကို ဖေါ်ညွှန်းတဲ့ ငါ
အခုစိတ်နဲ့ လည်း မဟုတ်ခဲ့တဲ့ငါ
ငါနဲ့ တူတာ ဘာကျန်ဦးမလဲ။
အခုရေတွင်းတူးရင် အခုရေကြည်သောက်ရမှ ကျေနပ်တတ်တယ်။
ညောင်ပင်ရမရ မသေချာတိုင်း ညောင်စေ့လေးကို နှမြောတတ်တယ်။
တသိန်းလိမ်ချိန်မှာ နောက်ဘဝဆိုတာကို မေ့ထားတတ်တယ်။
မကောင်းတာလုပ်ဖို့ လွယ်နေတဲ့အချိန်မှာ ငါက ငရဲကိုမေ့တယ်။
ကောင်းတာလုပ်ဖို့ ခက်နေတဲ့အချိန်မှာ ငါက နတ်ပြည်ကိုမေ့တယ်။
လက်တွေ့ ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ့် အချိန်ကျ
တကန့် စာ မီးခံသေတ္တာထဲမှာ သိမ်းထားလိုက်ပြီး
နံနက်ခင်းတချို့ မှာ စိတ်ဖြေရုံပဲ ထုတ်ကြည့်နေခဲ့။
ရေရဲ့ ပြင်ပမှာ မနေနိုင်တဲ့ငါးတွေလို
ကြိုးတွေရဲ့ ပြင်ပမှာ မနေနိုင်တဲ့ငါက
ခုချက်ခြင်း ဆုတောင်းတွေ ပြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်
ခုချက်ခြင်း ကြိုးတွေကို ငါဖြတ်ရဲပါ့မလား။
Posted by ဒေါင်းတမာန် at Sunday, August 02, 20090comments
၈၈၈၈ - ၂၁ နှစ်မြှောက်တော့မယ်
အဖေကျော် ပထွေး တရုတ်ကို အတုယူခိုးချသော နအဖ စစ်တပ်
တရုတ်ကို အတုယူခိုးချသော နအဖ စစ်တပ် ဆောင်းပါး ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း စနေနေ့၊ သြဂုတ်လ 01 ရက် 2009 ခုနှစ် 19 နာရီ 07
ပြည်သူ အတွက် တပ်မတော်-စနေနေ့၊ 01 သြဂုတ်လ 2009
▼ Aug2- Aug9(18)
ဆိုရှယ်လစ် စနစ်တခုကို အသက်သွေးများနဲ့ လဲယူခဲ့ကြရတဲ...
၂၁ နှစ် နွံထဲက ဗမာပြည် (သို့ ) လူသတ်အုပ်စုလက်ထဲက ဗ...
အမွေ - -------------------ကိုဒေါင်းနီ မှပေးပို့ သည...
အသက်တချောင်း ဆန်ကွဲဖွဲနုသို့ နယ် တန်ဖို့ တမျှနှင့်...
အပစ်ရပ်များအပေါ် ပိုမိုဖိအားပေး ထိန်းချုပ်ရန် ရပခ စ...
Respect for the state and know who you are crossin...